डिभोर्स पछि स्मारिकाले यो हाल ,भइन बिरामि,खान्छिन यति धेरै दबाइ (हेर्नुस् भिडियो ) – Sandesh Press
August 26, 2021 271
Prevसोच्दै नसोचेको घटना भयो ! प्रहरीलाई भ्यानभित्रै लात्ताले हाने, त्यसपछी के भयो ?
Nextचर्चित नायिका प्रियंका कार्कीलाई दिदी मान्दै आएका र्यापर भिटेनले मासु बोकेर प्रियंकालाई भेट्न गए.
साबधान ! फेरी आयो काठमाडौं बासीलाई यस्तो दुखद खबर, सचेत रहन आग्रह
आहा ! साउने संक्रातिमा अनिताले भगवान् जस्ता श्रिमान बिनोदलाई यसरी दिइन फुल (हेर्नुस् भिडियो )
परराष्ट्र मन्त्रालयले लुकाएको एमसीसीको अर्को पत्र सार्वजनिक, डरलाग्दो भाषा प्रयोग